29th March 2013-Fante
Friday Sermon: Learn the best Ways of worship and sacrifice - 29th March 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻw 29, 2013.
(Friday sermon – 29th March, 2013 – Fante Translation)
SUA AKWAN PA A WODUA DO SOM NA WƆBƆ AFƆR.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa nsɛmpa no wͻ Baitul Rahman asͻrdan (mosque) fofor no a ͻwͻ Valencia a ͻwͻ Spainman mu no. Ɔkenkaan Kuran mu nsɛmpa a ͻtoa do yi: “Na kae ber a Abraham na Ishmael maa Fie no ne fapem do na wͻbͻͻ mpae dɛ ‘Hɛn Ewuradze gye iyi to mu ma hɛn; ampaara dɛ Ɔwo nye Ɔsɛntsiefo a Inyim biribiara. Hɛn Ewuradze ma yɛnyɛ ahobrasefo mma Wo na ma hɛn asefo so nyɛ nkorͻfo a wͻayɛ ahobrasefo ama Wo na kyerɛ hɛn, hɛn som akwan nyinara na fa ehumbͻbͻr dan Wo ho bra hɛn do; osiandɛ Ɔwo nye mprenpren frɛfo, Mbͻbͻrhufo”. (2:128-129)
Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ yɛdze Ayɛyi nyinara ma Nyankopͻn, Ɔno a ͻnam No mboa do yeesi asͻrdan a ͻtͻdo ebien wͻ Spainman mu. Ɔkͻr do kaa dɛ bɛyɛ mfe esuon a etwa mu kͻ no, ͻkyerɛɛ hia a ohia dɛ wonya asͻrfi wͻ Spainman mu wͻ Basharat Asͻrdan, Pedroadbad. Wosii no gyina wͻ dɛm ber no dɛ wobesi asͻrdan no wͻ Valencia. Mbom asͻrmba a wͻwͻ apaamu hͻ no hͻn dodow bɛyɛ ͻha eduasa ara naaso hia a ohia dɛ wosi asͻrdan a ͻtͻ do ebien wͻ Spain nye bea no n’abakͻsɛm soronko ntsi. Mfe eduasa ntamu na Ahmadiyya Kuw dze etum esi asͻrdan yi. Dɛm mber yi mu no, nna Muslimfo aba Spainman mu ebesisi asͻrfi wͻ hͻ. Dɛm akwan yi na wobuei maa hͻn ma wosii Basharat Asͻrfi yi. Nokwarsɛm nye dɛ, mfe aha esuon akyir na Ahmadiyya Kuw yi tumii sii asͻrdan wͻ Spainman mu. Seseiara Muslimfo a wͻwͻ Spainman mu hͻn dodow keka kͻ ͻpepe kor na wͻbu no dɛ ontu ara ma afe 2030 ndu no nna ͻha mu nkyekyɛmu eduowͻtwe (80%) abɛka dͻm no ho a hͻn dodow bodu ͻpepe ebien.
Mfe eduosa a etwa mu no nna Muslimfo a wͻwͻ Spainman mu yɛ apem mu kumaabi. Ɔdodow noara wͻyɛ Muslimfo wͻ Spainman mu no wͻfi Ebibirimu Etsifi na yɛbotum aka dɛ wͻyɛ Muslimfo a wͻwͻ Ɔman no mu a wͻdze nhyɛ sakyer hͻn gyedzi ma wͻbɛyɛɛ Krsitianfo. Woyinom dze hͻn Muslim gyedzi no sumae na ekyir no wͻsanee baa Islam mu. Ɔnam Nyankopͻn N’adom ntsi Muslimfo pii wͻ Spainman mu na dɛm dͻm a wͻrodͻr yi Ahmadiyya Kuw na wͻhyɛɛ mu nkodzen. Mbom nokwar Islam no bɛba mu wͻ Spainman mu wͻ ber a hͻn a wͻyɛ asomfo ma Messiah no a ofi Muhammad mu no, bɛgye hͻn ho ato mu yie ma wͻdze asɛm no atahye Ɔman no ne beebiara ma obiara aatse. Obinom bɛka dɛ Ahmdiyyafo a wͻwͻ ha suar na wobesi dɛn dze asɛm no akͻ obiara hͻ? Ampaara, sɛ obi gyina, si nketse na ͻma no mu do a yebotum ayɛ. Nhyehyɛɛ pii na wͻtaa yɛ wͻ iyi ho naaso wͻmmfa nnkͻ nyɛe mu. Nhyehyɛɛ a wͻdze fi Ɔsom yi ne tsir anaaso Hadhrat Khalifatul Masih hͻ anaaso, ampaara Hadhrat Khalifatul Masih IV (Nyankopͻn nhu no mbͻbͻr) rebɛba no mpo wͻammfa annyɛ edwuma. Bea a Basharat Asͻrfi si no bɛn kar kwan a ͻdze kͻ Cordoba. Sɛ wͻhyehyɛɛ nyɛe kwan bi a nkyɛ wofi hͻ dze asɛm no bɛtahye. Hɛn Jama’at no mu bi, mbom wosuar dze, woetum nam nkrataa do dze asɛm no apetse dodowara do. Dͻm pii a wommfi Ɔman no mu kͻ Basharat Asͻrfi kͻ hwɛ. Sɛ wͻdze enyiber na nkanyan yɛɛ edwuma no a nkyɛ asɛm no atahye. Muslimfo nkaa no botum dze nyimpa mpem eduonu a wͻyɛ “Spain Muslimfo aboasee” ahɛn Islam mu bio a, nkyɛ ebɛnadze ntsi na hɛn Nyamesɛmka (Tabligh) ͻkyerɛ Nokwar Islam no nnkotum ayɛ iyi? Ampaara yebuei akwan no wͻ enyiber na nkenyan mu na mbom yɛammfa akwan no mu ma binom mbom na wosuo mu. Banodzifo a wͻwͻ Spain mpɛnpɛndo biara hyɛ hͻn nsew, yɛ nhyehyɛɛ na wͻbͻ mbͻdzen dɛ ͻbɛyɛ yie.
Islam ho nokwar mfonyin a yɛdze kyerɛ no wͻdɛ yɛdze to gua ndɛ mber yi. Nokrͻfo a wͻyɛ Spain Muslimfo aboasee no wͻdɛ yɛma wohu dɛ mber aso a hͻn nananom ewurkadze a wͻyɛe no wͻyɛ bi hyɛ ananmu. Mbom onnyi dɛ wͻdze nhyɛ yɛ iyi, osiandɛ Islam si no ewur dɛ “Onnyi dɛ nhyɛ ba Nyamesom mu” (2:257). Na Nyankopͻn ka dɛ onnyi dɛ dza woatanfo yɛ gye wo ma eyɛ dza ͻmmfa mbra mu. “Hom nyɛ pɛrpɛr aber nyinara na iyi na ͻbɛn tseneneeyɛ” (5:9). Tseneneeyɛ (Taqwa) nkotsee na ͻtwe nyimpa bɛn Nyankopͻn. Eso, ͻmmafa bͻn ho wͻ ha; dɛm nkorͻfo yi yɛ ͻmamfo na hͻn na asomdwe na ͻdͻ nsɛm yi wͻ dɛ wͻdze ma hͻn. Ɔwͻ dɛ yedzi kan ka kyerɛ hͻn ma wͻfa Islam nkyerɛkyerɛ fɛɛfɛw yi na dza apa ho no yɛyɛ no yie na yɛfa dɛm nkyerɛkyerɛ fɛɛfɛw yi do yɛtwe dͻm hͻn akoma. Akoma a wͻnam nhyɛ do maa wͻdze biribi bataa Nyankopͻn ho no wͻdze ͻdͻ wͻ Nyame Kor ho ͻnye Muhammad (NNN) dɛ ͻyɛ Nyankopͻn no Somafo no, hyɛ mu.Ɔdͻ a yɛwͻ ma Nyankopͻn no a N’ehumbͻbͻr abͻdzin a otwa N’abͻdzin nkaa no nyinara ͻnye Ɔsomafo no a ͻyɛ Rahmatullih A’lameen (Ɔyɛ Ehumbͻbͻr ma wiadze nyinara) noho. Dɛm Muslim ekuwekuw adadaw yinom yɛhwehwɛ hͻn mu na yekenyan nokwar som no ho dͻ wͻ hͻn mu na yɛdan hͻn yɛ hͻn Nyamesɛm ho asͻfo.
Siantsir a ͻmaa Khalifatl Masih yii Valencia dɛ wonsi asͻrfi no nye dɛ Spainfo hͻn abakͻsɛm kyerɛ dɛ ber a ͻhen na ͻhembaa etsiͻdzenfo daan Muslimfo no ma wͻbɛyɛɛ Kristianfo no, Valencia nye bea a, ayɛyɛdze ekyir nyinara wͻkͻͻr do kaa Araibc kasa. Muslimfo a wͻwͻ Valencia kͻͻr do soom Nyankopͻn na wogyinaa hͻn nkyerɛkyerɛ no mu wͻ ber a Spain Muslimfo a wͻwͻ hͻ dɛm ber no wͻannda hͻn som no edzi pefee. Ber a ͻhen no yɛɛ n’adwen dɛ obotu Muslimfo a wͻwͻ Spain wͻ afe 1600 mu no, Muslimfo a wͻwͻ Valencia na wodzii kan tuu hͻn osiandɛ wͻbͻͻ mbɛdzen dɛ wͻbɛyɛ hͻn som no. Nna Spain Muslimfo yɛ ehiafo ma wͻdze nkakra nkakra tuu hͻn fii nkurow akɛseakɛse no mu ma woetu hͻn apetse. Iyi ekyir no ahemfo dzii Spain do. Italy nsordaafo yɛɛ ewurkadze na wotuu Muslimfo mbrɛntsɛ na mbabaawa na wͻdze hͻn mba kͻr Kristian efiefi mu ma wͻdze hͻn yɛɛ nkowaa na ntanyi. Wͻamma mbofra no kwan ma wͻannsom Nyame kor no na wͻhyɛɛ hͻn ma wͻgyee Ɔkorsa gyedzi no too mu. Ndɛ ͻyɛ hɛn dwuma son dɛ yɛbɛsan ayɛ hͻn Nyame Kor asomfo. Ɔwͻ dɛ yɛdze dɛm asɛm ma binom so, ͻnam nyimpa ho ayɛmuyie ntsi na yenya tsema ma hͻn dɛ mbrɛ yenya tsema ma hɛn ho. Ɔwͻ dɛ yɛbͻ mbͻdzen wͻ dɛm tsebea yi mu osiandɛ wosuoo Islam mu kͻr ewie wͻ ha. Ha dze woenntu hͻn mfe ͻha ntoatoado esuon a abɛsen kͻ no; mbom ntui no sii mfe ahanan a abɛsen kͻ no.
Ekyingye biara nnyi mu dɛ mfe pii a woedze Spain do yi, Muslimfo no hͻn nhweasee no sii ͻnam hͻnara hͻn pɛsemankonya na nsusubͻn ntsi. Hͻn banodzifo a wͻfaa no dɛ ͻyɛ Khalifa no o, anaa Ɔhen no o, hͻn mu biara annyɛ n’ahyɛdze ma mpanyimfo yɛɛ dɛmara. Obiara yɛɛ dza noara ͻpɛ na iyi maa okowiee dɛ dwumadzi biara a pɛsemankonya dzi mu adͻntsen no, wie. Afei a Anohoba Messiah (ANN) ridzi dwuma yi, ͻyɛ n’akadofo nyinara hͻn dwumadzi dɛ wͻdze enyimnyam no a ayew no ba bio na wͻtwe nkorͻfo no hͻn adwen gyina Islam asɛmpa do “Obiara nnyi hͻ a ͻfata dɛ yɛsom gyedɛ Allah na Muhammad yɛ N’akowa na No Somafo”. Nyankopͻn aboa hɛn ma y’esi asͻrfi wͻ ntabakamu ha na y’enya bea a odzi mu mapa dze edzi dɛm dwuma yi.
Asͻrfi si finimfin bea a sɛ enam tseaseanam kwan do a ͻda noho edzi pefee. Bea yi yɛ enyimnyam bea eso nkorͻfo a wodzi hͻn ho nyi etwa hɛn ho ehyia. Iyi Nyame N’adom a. Onnyi dɛ hɛn enyi gye kɛkɛ dɛ y’esi asͻrfi fɛɛfɛw bi so wͻ Spain kurow kɛse mu. Ɔwͻ dɛ yeker hɛn ho hwɛ; ͻwͻ dɛ yedzi ͻsom ne nhyehyɛɛ do, dɛmara so na ͻwͻ dɛ yedzi hɛn ahyɛdze do. Kuran mu asɛm a yɛkanee dze hyɛɛ Nyamesɛmka yi ase no kyerɛ kwan tsen a Hadhrat Abraham na Hadhrat Ishmael (ANN) kyerɛɛ hɛn sɛ yesi Nyame dan a, yeendzi hɛn ahyɛdze do. Ɔwͻ dɛ yɛdwen dɛm asɛm yi ho ama nkorͻfo a wͻrebͻwo hͻn awow ntoatoado mu ayɛ Nyankopͻn N’ahyɛdze. Asɛm a yɛkenkanee fii Kuran mu no yɛ mpaabͻ a Hadhrat Abraham (ANN) bͻe ber a ͻrotow Ka’ba ne bamba no. Mfe pii a Abraham ne ba na ne yer tuu hͻn ho mae no, wͻammbͻ mpaa ara kwa “O Nyankopͻn yɛnam Wo kwan do etu hɛn ho akyɛ wͻ Wo mbransɛm do, hɛn aserɛdze nye dɛ ebɛggye hɛn afͻrbͻ biara ato mu na ma ͻnyɛ mberɛw mma hɛn”.
Nnyɛ Ahmadiyya Kuw no nko mbom Muslimfo nkaa no so dze enyigye ka afͻrbͻ ho asɛm. Eso dza Nyankopͻn nam Nkͻnhyɛnyi do akyerɛ nye dɛ ͻbabanyin no ayɛ krado dɛ wͻdze no bͻbͻ afͻr na egya no so ayɛ krado dɛ ͻdze ne babanyin a ͻwoo no ne mpanyinyɛ mu no bͻbͻ afͻr. Bio ͻgyae ne yer na ne babanyin wͻ sar no do, ber bae a ne yer na ne babanyin hͻn afͻrbͻ wͻgyee too mu na wͻhwɛɛ hͻn. Ber a worisi Ka’ba no dɛm nkorͻfo beenu yi (Hadhrat Abraham ͻnye ne babanyin Hadhrat Ishmael) kaa dɛ hͻn botae nye dɛ Nyankopͻn Ne Dan no enya dͻm, ampaara dɛ wͻdze dͻm a wͻyɛ agyedzifo a wͻbɛhyɛ Nyankopͻn no som no enyimnyam na wͻakrͻn No som no kɛsekɛse. Nna nkorͻfo yi nam Nyankopͻn Ne mbransɛm do risi Nyankopͻn Ne Dan no, na hͻn ahobrase na Nyankopͻn ho dͻ so ara ma wͻtotoe serɛɛ No dɛ Ɔngye hͻn afͻrbͻ. Iyi nye adzesuadze wͻ afͻrbͻ ho; dɛ ebͻbͻ afͻr na edze ahobrase adan aakͻ Nyankopͻn nkyɛn na eyɛ asͻr ma Ɔgye w’afͻrbͻ to mu. Dɛm Abraham na Ishmael ndzeyɛɛ na mpaabͻ yi na ͻtwe hɛn adwen gyina do dɛ yɛyɛ akadofo ma nyimpa no a otuu noho mae na onyaa ͻdͻ soronko maa Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN). Nyankopͻn dze Abraham n’abͻdzin a ͻfa no dɛm mber yi mu maa no. Ɔno a ͻyɛɛ gyedzi ne bamba no yie na ͻseraa Islam n’ahofɛw ho na ͻdze maa wiadze wͻ n’enyimnyam mu ara ma hͻn a wͻnnyɛ Muslimfo ka dɛ sɛ dɛm na Islam tse dza a nna yɛtwe hɛn nsɛm a yɛkekaa tsiaa Islam san.
Ndɛ botae a wͻdze sii Ka’ba nyinara nam Abraham na Islam nkyerɛkyerɛ nwansanwansa rehyɛ ma dze kyerɛ wiadze. Hɛn Asͻrfi a wͻwͻ wiadze yi ne fɛnandze biara dzi dase dze hyɛ dɛm botae yi ma na asͻrfi yi a yɛato no dzin Baitur Rahman yi so da dɛm botae yi edzi. Ber a dɛm asͻrfi yi rotwe hɛn adwen dɛ yɛmfa ahobrase ndan nkͻ hɛn botae do yi, dɛmara so na ͻtwe hɛn adwen kͻ bͻhyɛ a yɛahyɛ na hɛn asodzii. Iyi nkotsee na ͻbɛma hɛn botae atͻmu.
Yɛ ka dɛ: O Messiah a ifi Muhammad mu, ͻwo a etu woho akyɛ nokwar mu ama Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) yɛahyɛ bͻ ama no dɛ yɛbɛma gyedzi edzi hɛn adͻntsen asen wiadze ndzɛmba nyinara na yɛdze Tawheed (Nyankopͻn Baako No) bɛtahye. Dɛm asͻrfi yi ne nsii bͻtwe wiadze adwen akͻ Islam ho na Tabligh akwan bͻbuebuei. Dɛ ehiadze nyinara bɛba mu na yɛdze hɛn ahoͻdzen, hɛn dwumadzi a odzi adͻntsen nye yɛbɛma Tawheed etsim, na yɛdze ͻman yi mu nkorͻfo bɛba Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne ntamadan ase. O Nyankopͻn, Ɔwo a etse nsɛm biara, Ɔwo a Inyim biribiara, tsie mpaabͻ na boa hɛn ma yendzi dwumadzi yi do. Yɛ asͻrfi yi bea a yɛnam do ma hɛn botae a yɛdze sii W’asͻrdan yi ahyɛ ma. Ɔwo nyim biribiara, Ɔwo nyim hɛn sintͻ, gye hɛn mpaabͻ to mu na mma nnhwɛ hɛn mberɛwyɛ.
Ampaara dɛ asͻrdan ne fɛw wͻ dɛ yɛbɛyɛ dza ͻfata dɛ yɛyɛ no wͻ ho. Dɛ yɛbɛsom Nyankopͻn wͻ mu na yɛayɛ dza ͻfata dɛ yɛyɛ ma adasamba. Iyi na ͻbɛda Islam ne fɛw edzi ma wͻatwe dͻm abɛn Islam. Ber a nna Muslimfo dzi Spain do wͻ mfe pii no, wosisii asͻrdan pii wͻ hͻ. Tsitsiriw asͻrdan a ͻwͻ Cordoba ne fɛw yɛ nwanwa ͻnye pii a ͻkeka ho a Muslimfo kͻr ho. Kor so wͻ Granada man mu. Na aber a Islam no nokwar nkyerɛkyerɛ fii hͻn mu no na Nyankopͻn Ne koryɛ no so fii hͻn mu no, adan yi nyinara sɛsɛɛe anaa wͻdze yɛɛ Kristianfo hͻn asͻrdan. Ɔyɛ nwanwa dɛ obi bohu Cordoba asͻrdan no ne fɛw a ͻyɛ bɛpem ndɛ nyinara wͻ mfe pii ekyir. Mber a Muslimfo yew hͻn gyedzi no, asͻrdan no fii hͻn nsamu kedzii obinom nsamu. Asɛm yi siantsir nyɛ asͻrdan no ne fɛw mbom na ͻyɛ nkorͻfo a wͻwͻ mu no hͻn gyedzi a. Ampaara dɛ ͻwͻ dɛ yɛhwɛ sunsum a ͻwͻ asͻrdan no mu. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ yɛdze edwuma dzen nye asͻryɛ dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a yɛbenya nkorͻfo a wͻboso asͻrdan sunsum mu na wͻama ayɛ Nyankopͻn No Koryɛ fapem kͻpem atsɛnbuda.
Wͻ kyɛfa a me dzii kan kenkanee wͻ ahyɛse no, nkyͻnhyɛfo enyimnyamfo no ammbͻ mpae amma hͻn ho ara nko. Mbom wͻbͻͻ mpae ma ͻsoo hͻn mba nye hͻn awow ntoatoado do. Iyi yɛ mpaabͻ ne kwan pa na ͻwͻ hͻ ma nkorͻfo a wͻpɛ dɛ hͻn na hͻn ekyir mba yɛ nkunyimdzifo. Sɛ yɛbͻ dɛm mpae yi na yɛserɛ dɛ Nyankopͻn mma hɛn asefo nyɛ atseneneefo a wͻbɛhyɛ asͻrdan yi ho botae ma. Nyankopͻn bɛgye hɛn afͻrbͻ ato mu wͻ aber a yɛbenya nkorͻfo a wͻbɛyɛ Nyankopͻn na adasamba hͻn asɛdze. Ɔwͻ dɛ yɛbͻ mpaa dɛ mbrɛ akͻnhyɛfo no yɛe no. O! hɛn Ewuradze kyerɛ hɛn kwan a yɛbɛfa do asom Wo. Sɛ yɛbotum atse som na afͻrbͻ ase a gyedɛ ͻnam Nyankopͻn N’akwankyerɛ do. Nyankopͻn N’adom do na yɛbotum enya som mu ntseasee. Salat yɛ Nyamesom naaso yɛwͻ nkorͻfo bi a Nyankopͻn aka dɛ hͻn Salat bɛsan abͻ hͻn do na ͻbɛyɛ ͻsɛɛe kwan ama hͻn. Ɔwͻ dɛ yɛbͻ mbͻdzen yɛ asͻr a wͻbɛgye ato mu wͻ N’adom mu. Sɛ ͻba dɛm a dwumadzi biara a yɛbɛdzi bɛyɛ Nyamesom. Sɛ yɛreyɛ ama nyimpa mpo a, ͻyɛ Nyamesom no bi.
Ɔwͻ dɛ yɛbͻ mpaa ma hɛn asefo wͻ enyiber do na yɛhyɛ bͻ dɛ yɛbͻbͻ afͻr biara a ͻfata dɛ yɛbͻ. Ɔwͻ dɛ yɛdze dɛm sunsum yi hyɛ hɛn asefo mu. Ɔwͻ dɛ yɛhu dɛ mber ma afͻrbͻ sesa. Mber a Muslimfo edzikanfo baa Spainman mu no nna wͻtserɛɛw no, wͻdze akodze yɛɛ (Jihad). Dɛn mber yi dze Jihad a ohia nye Nyamesɛmka (Tabligh)nye sika afͻrbͻ a yɛdze besisi asͻrdan. Mber ma afͻrbͻ sesa. Hadhrat Abraham bͻͻ mpaa bisaa kwan a ͻmfa do mbͻ afͻr na ͻnam iyi do maa Nyankopͻn kyerɛɛ kwan a yɛmfa do. Ɔkyerɛɛ dɛ yɛmbͻ afͻr dɛ mber gyinabew no rehwehwɛ. Ɔwͻ dɛ yɛyɛ ahotsewee dɛ mbrɛ yɛbenya Nyankopͻn N’enyigye.
Dɛm ntsi Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no kaa kyerɛ obi dɛ ͻnyɛ Jihad na obi so kaa kyerɛ no dɛ ͻnye ahamanakye asͻr (Tahajjud). Dɛm ntsi tsenenee nyɛ dza yɛnyi na yɛbͻhwehwɛ na iyi nye kwan a yɛbɛfa do asom Nyankopͻn na iyi so nye hɛn afͻrbͻ. Asͻryɛ ma yɛbͻ mbͻdzen dɛ yɛbeyi hɛn mberɛwyɛ akwa nye hɛn asefo. Ɔwͻ dɛ yɛtse ase dɛ yɛrunntum nndua hɛnara hɛn ahoͻdzen do nyɛ asͻr anaa mbͻ afͻr papa biara. Dɛm ntsi yɛmbͻ mpaa dɛ mbrɛ wobohu hɛn mbͻbͻr. Dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ ma afͻrbͻ kor atwetwe afͻrbͻ fofor. Na Nyamesom nyɛ hɛn adwendwen tsitsiriw. Hͻn a hͻn tsir yie nye hͻn a wobedzi kwan yi ekyir na wͻaba Nyankopͻn Ne bambͻ ase na wͻeyi mberɛwyɛ nye etsirmoͻdzen akwa. Na afei wͻabͻ mpaa ama hͻn asefo na wͻatsetse hͻn dɛm kwan yi do. Ɔwͻ dɛ yɛtwe hɛn adwen gyina dɛ yɛbɛsom adasamba yie na yɛeyi ntsɛn na ndaadaa efi hɛn mu. Ɔwͻ dɛ yɛyi mberɛwyɛ fi hɛn asͻryɛ mu nye asͻr biara a ne nyɛɛ yɛ hɛn dzen mu na yɛmfa ahwɛyie na yɛmma hɛn adwen nkͻ hɛn asͻryɛ do. Sɛ asͻrfi mu asͻryɛ na ͻyɛ dzen ma hɛn a wͻmma yɛnhwɛ ͻno nso. Sɛ yɛnnhwɛ hɛn awofo yie a wͻma yɛnhwɛ hͻn yie, sɛ hɛn mbofra na yɛnnhwɛ hͻn yie a, yɛmbͻ mbͻdzen na yɛnhwɛ hͻn yie. Sɛ yɛnhwɛ hɛn ntabakamufo yie a hom mma yɛnhwɛ hͻn yie na yɛmma hɛn suban pa ntwetwe hͻn mbra Ahmadiyyat nokwar Islam no mu. Sɛ yedzi dɛm edwumapa nyinara a nna yɛbotum aserɛ Nyankopͻn dɛ Ɔngye hɛn nnuho nto mu, na Onnya ehumbͻbͻr wͻ hɛn do.
Ampaara dɛ ͻwͻ dɛ yɛhu nkorͻfo mbͻbͻr sɛ yɛpɛ dɛ Nyankopͻn hu hɛn mbͻbͻr a. Sɛ gyedzinyi nye asͻrdan nya nkitahodzi a ͻno tsenenee abobow ahorow bue ma no na onya bͻnfakyɛ. Ndɛ dɛm asͻrdan yi a Nyankopͻn dze adom hɛn yi, hom mma yɛnyɛ no ho ahyɛdze. Hͻn a wͻbɛn asͻrdan yi no, ͻwͻ dɛ wͻhyɛ no ma nye hͻn mba sɛ ͻyɛ Nyame Ne pɛ a. Yɛserɛ Nyankopͻn dɛ Ɔmfa asͻrdan no ho nhyira nyinara ndom hɛn na Ɔngye hɛn nnuho nto mu na Ɔmfa hɛn mfom nkyɛ hɛn.
Ndɛ mber yi ohia ma hɛn dɛ yɛyɛ Jihad tsia hɛn pɛ do. Dɛ yɛbɛbͻ Islam ho dawur so yɛ Jihad, dɛm ntsi ͻwͻ dɛ yɛma hɛn adwen kͻ do. Yɛrenntum nndzi nkunyim gyedɛ ͻnam Nyankopͻn No mboa do. Nyankopͻn N’adom ba wͻ ber a obi edzi ne Nyamesom Ne nhyehyɛɛ do. Yɛbenya N’adom wͻ ber a yɛbɛyɛ asͻr na yɛayɛ Jihad wͻ hɛnara hɛn mu na yɛayɛ Jihad atserɛw Islam ne nsɛmpa no mu. Hɛn mber do yi nyimpa hia dɛm Jihad yi yie papaapa. Dɛn Jihad yi pɛr na obotum atwe hɛn efi wiadze nkekaawa ho na wͻama yɛanya Nyame N’adom nye hɛn asefo so.
Hom mfa asͻryɛ nkyerɛ asͻrdan yi n’ahoͻfɛw. Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn mma yɛnhwɛ asͻrdan yi no botae ma yɛntum nyɛ hɛn ahyɛdze a ͻda hɛn do. Asͻrdan bi a Egypt nye Saud Arabiafo esi wͻ mpͻta mu ha, dza ͻka ekyir wͻ asͻrdan yi ho nye dɛ wͻnngye Messiah no nndzi. Ɔwͻ dɛ iyi nkotsee mpo ma Ahmadiyyafo adwen kͻ asͻrdan yi do papaapa na wͻyɛ hͻn asodzi a ͻda hͻn do. Nyankopͻn mma wontum nyɛ iyi. Nsɛm a ͻfa asͻrdan yi ho kyerɛ dɛ osi asaase a ne kɛse bɛyɛ anamon 1350 (cubic) do, asaase no ne bo som Euro sika 1,200,000. Spain Jama’at hͻn sika a ͻwͻ mu suar. Sɛ ahokyer wͻ mpo a, ͻwͻ dɛ yɛtum hyɛ sika anohoba mã. Kwan fofor a yɛbotum afa do dze aboa nye dɛ yɛbɛboa Tabligh edwuma no. Asa no nyimpa aha ebien eduonum (250) botum ayɛ asͻr wͻ mu naaso yɛhu dɛ hͻ sõ papaapa. Dza ͻka ho bi nye office adan esuon na “library” nye bea a wͻton nwoma (bookshop)nye gyaadze (kitchen) fiadze nye mfirdan. Mframa winwin wͻ adan no nyinara mu.
Dawurbͻ nkrataa aka no dɛ asͻrdan kɛse a ͻsen asͻrdan ahorow nyinara a ͻwͻ mpͻtamu hͻ no ayɛ akrado. Bea no wͻ fie adan naaso wͻdze adan ebiasa aka ho. Ampaara dɛ obedzi mu wͻ ber a yɛbɛyɛ hɛn asɛdze yie. Dza Dawurbͻ krataa dze too gua bi so nye dɛ ͻnam Ahmadiyyafo hͻn Nyamesom pa nye atuhoakyɛ ntsi wokyir ewudzi wͻ Nyankopͻn Ne dzin mu. Asͻrdan noara so wͻ asado akɛse ebiasa a wͻbotum ayɛ ndzɛmba ahorow pii wͻ hͻ. Hom mma asͻrdan yi nya Islam ne mfonyi pa nkyerɛ nkorͻfo a wͻwͻ mpͻtamu ha na Ahmadiyyanyi biara nyɛ asɛdze dɛ mbrɛ ͻsɛ na ͻfata. Asͻrdan yi ho dwumadzi a ͻfa sika afa mu ne dodow ara fir asͻr yi ne asoɛe.
Hɛn asͻr panyin a ͻyɛ “Engineer” Owura Chaudhry Ijaz dzii dwuma pii wͻ dan yi ho mpɛn pii na ͻmaa ndzɛmba no bo baa famu naaso wͻamma dza ͻfata dɛ wͻyɛ no ammbrɛ adze. Onnyi ahoͻdzen papa ntsi ͻfa ber to ber no ͻgye mfir ayarsa (dialysis) naaso ͻyɛɛ edwumadzen papaapa. Nyankoͻn nhyira no na Ɔma no akatua pa nye apow mu dzen dɛ mbrɛ obotum asom asͻr yi akͻ ekyir.